riyo Cusub oo Virus ah? WTN waxay ku baaqaysaa Waajibaadka Tallaalka Caalamiga ah iyo Sinnaanta Qaybinta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wtn » riyo Cusub oo Virus ah? WTN waxay ku baaqaysaa Waajibaadka Tallaalka Caalamiga ah iyo Sinnaanta Qaybinta
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Koonfur Afrika waxay ku jirtaa xaalad naxdin iyo xanaaq ka dib markii la ogaaday nooca Omicron ee coronavirus.
Habeenkii, dalxiis iyo warshado dalxiis oo sugaya iftiin ifaya dhamaadka tunnel-ka, waxay ku noqdeen casrigii mugdiga ahaa iyadoo xuduudaha la xiray, duulimaadyadii la joojiyay, iyo fayraska aan la garanayn oo khatar ku ah caafimaadka bulshada iyo hab-nololeedyada.
Maanta, dunidu waxay wajaheysaa dhibaato kale oo caafimaad oo dadweyne iyadoo la ogaaday wax aan weli la aqoon laakiin aad u khatar badan oo ah nooca Omicron ee coronavirus. Cadaadisku wuxuu ka yimid Koonfur Afrika, waxaana sidoo kale lagu arkay kiis go'doonsan oo ku yaal Hong Kong iyo Belgium.
23.8% dadka ku nool Koonfur Afrika ayaa si buuxda loo tallaalay, meelo badan oo Afrika ah, tiradani waa hal lambar oo keliya, iyadoo aan la hayn tallaal ku filan.
Dalxiisku waxa uu hadda u baahan yahay midnimo adduun si ka badan sidii hore oo ay ummaduhu ku caawiyaan dalalkooda.
Dr. Peter Tarlow, Madaxweynaha WTN, wuxuu xasuusinayaa adduunka in dhammaan quruumaha ay wadaagaan meerahan yar iyo in aan ka wada shaqeyno sidii loo ciribtiri lahaa COVID-19 meel kasta oo meeraha ah.
La dagaallanka COVID ma aha shaqada hal waddan oo keliya, laakiin dhammaan waddamada iyo dhulalka oo ka wada shaqeeya caafimaadka iyo adduun nabdoon.
Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz ayaa intaa ku daray: “In si siman loogu qaybiyo dhammaan dalalka waa furaha. Aan xasuusino aduunka: Qofna ma badbaado ilaa qof walba la tallaalo!"
Tan waxaa la ogaa bilowgii markii madaxweynaha Mareykanka Biden uu yiri wax yar uun ka dib markii la caleema saaray, Qofna ma badbaado ilaa qof kastaa uu badbaado.
Iyadoo aan la raacin xeerarka sayniska, noocyo badan oo ka baxsan xakamaynta fayraska sida nooca Omicron ayaa si fudud u kobci kara. Kala duwanaanshiyaha noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa in maalin uun ay ka baxsadaan ilaalinta tallaalkayaga hadda, taas oo ku qasbeysa adduunka in uu bilaabo mar kasta.
Tani waa khatar bini'aadmigu aanu kari karin mana aha inay sii jirto.
Gaar ahaan, waddamada aan tallaalku ka jirin, khatarta ah in ay kiciso xaalad-qaweedkan oo kale waa mid sare.
Xaalada ka soo cusboonaatay Koonfur Afrika ayaa hadda 8 wadan ka go'doomisay safarrada iyo dalxiiska caalamiga ah, waxaana hakad ku jira dhaqaalihii. Kani waa in uu dhammaanteen u ahaadaa baaq toos ah.
In la xidho xudduudaha u dhexeeya waddammada waa hagaajin aad u gaaban oo keliya. Adduunyadu waa isku xidhan yihiin, fayraskuna ma ixtiraamo xuduudaha. Furaha ay dadku garanayaan waqtigan waa tallaalka.
Tan waxa ku jira qaybin ballaadhan oo rajo leh oo dhammaystiran meel kasta, oo ka madax bannaan faa'iido dhaqaale ama xannibaad, mawqif siyaasadeed, iyo sababo kale oo dhulka ah.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka Mar kale waxay ku baaqaysaa nasinta xeerarka patent-ka iyo heshiisyada caalamiga ah si loo xaqiijiyo helitaan ballaaran oo dhamaystiran oo tallaal wax ku ool ah meel kasta.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka, oo ah lamaanaha muhiimka ah ee Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB), waxay dareentaa dadka ku nool Koonfurta Afrika, gaar ahaan saaxiibada iyo xubnaha ku jira warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Guddoomiyaha ATB Cuthbert Ncube ayaa si cad uga hadlay arrimaha qaybinta tallaalka siman iyo nasinta shuruudaha shatiga si loo fududeeyo tan.
Xaaladani waxay qaadanaysaa hogaan dhab ah oo ka baxsan dalxiiska, dhamaanteen waxaan u baahanahay inaan riixno oo taageerno hindise kasta oo xaqiijinaya yoolkan aadanaha ee helitaanka tallaalka.
Hoggaan wax ku ool ah oo aan danayste ahayn oo ka jira UNWTO, WHO, dawladaha, iyo warshadaha muhiimka ah ayaa maanta ka muhimsan waligeed.
WTN waxay taageertaa amarka tallaalka haddii ay sidaas taageeraan Maamulka Sayniska iyo Caafimaadka, iyo kuwa awood u leh inay si badbaado leh u qaataan tallaalka.
Wax badan oo ku saabsan Shabakadda Dalxiiska Adduunka iyo xubinnimada: www.wtn.travel